တရုတ်နိုင်ငံက အခြားနိုင်ငံများထက် ပိုမိုစိမ်းလန်းသောနိုင်ငံဖြစ်လာကြောင်း ဘီဘီစီပြော - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း အန်ဟွေးပြည်နယ် Huainan မြို့ Panji ခရိုင်ရှိ ဆိုလာလုပ်ငန်းခွင်တွင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေသည့် အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးအား တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
လန်ဒန်၊ ဩဂုတ် ၁၁ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံသည် အနာဂတ် သန့်ရှင်းသောစွမ်းအင် အကူးအပြောင်း၌ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဦးဆောင်လျက်ရှိပြီး ၎င်း၏ အစိမ်းရောင်နည်းပညာ ထုတ်လုပ်မှုက အကြောင်းပြချက်ဖြစ်ကြောင်း ဘီဘီစီ၏ ဩဂုတ် ၉ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်သည့် ဆောင်းပါးအရ သိရသည်။တရုတ်နိုင်ငံသည် အခြားမည်သည့်နိုင်ငံထက်မဆို ဆိုလာစွမ်းအင်ကို ပိုမိုထုတ်လုပ်လျက်ရှိကြောင်း၊ နိုင်ငံ၏ လေစွမ်းအင်တပ်ဆင်ခြင်းများသည်လည်း ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၌ အခြားမည်သည့်နိုင်ငံထက်မဆို သုံးဆကျော် ရှိကြောင်း ဆောင်းပါးတွင် ဖော်ပြထားသည်။
“တရုတ်နိုင်ငံက ကမ္ဘာ့စွမ်းအင်ကူးပြောင်းမှုမှာ ဦးဆောင်နေပြီးဖြစ်ပါတယ်” ဟု Overseas Development Institute မှ ယွီချောင်၏ ပြောကြားချက်အား ကိုးကား၍ ဆောင်းပါးက ဖော်ပြထားသည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် လျှပ်စစ်ကားရောင်းချမှု ရာခိုင်နှုန်းမှာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အဆင့် ၇ ရှိကြောင်း ဆောင်းပါးက ဆိုသည်။ လေ့လာမှုများတွင် လျှပ်စစ်ကားများ၏ သက်တမ်းအတွင်း ညစ်ညမ်းမှု ထုတ်လွှတ်ခြင်းသည် ဓာတ်ဆီနှင့် ဒီဇယ် တစ်မျိုးမျိုးထက် လျော့နည်းကြောင်း၊ လောင်စာ မီးလောင်ကျွမ်းမှုမှ ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု၏ လေးပုံတစ်ပုံခန့်မှာ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီး လမ်းပေါ်သွားမော်တော်ယာဉ်များက အများဆုံးထုတ်လွှတ်လျက်ရှိကြောင်း ဆောင်းပါးက ဖော်ပြထားသည်။
အစိမ်းရောင်စွမ်းအင် ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံသည် ပိုမိုစိမ်းလန်းလာပြီဖြစ်ကြောင်း၊ “သတင်းများကလည်း အားပေးလျက်ရှိပါတယ်။ မြေဆီလွှာတိုက်စားမှုနှင့် ညစ်ညမ်းမှု လျှော့ချဖို့ နိုင်ငံ၏ သစ်တောလုပ်ငန်း အစီအစဉ်ကြီးမားလာတာနဲ့အမျှ တရုတ်နိုင်ငံက အခြားနိုင်ငံများထက် ပိုမို မြန်ဆန်စွာ စိမ်းလန်းလာနေပါပြီ” ဟု ဆောင်းပါးက မှတ်ချက်ပြုထားသည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် ချဉ်းကပ်မှုမျိုးစုံ ပေါင်းစည်းမှုမှတစ်ဆင့် ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုများကို ဖြစ်နိုင်သမျှမြန်မြန် လျှော့ချသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သဘာဝပေါက်ပင်ဖုံးလွှမ်းထားသော ကုန်းမြေဧရိယာ တိုးမြှင့်လာခြင်းက ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက် စုပ်ယူသော သစ်ပင်များအဖြစ် အထောက်အကူဖြစ်စေမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆောင်းပါးက ဖော်ပြထားသည်။ (Xinhua)
LONDON, Aug. 10 (Xinhua) — China is leading the world in transitioning toaclean energy future and its manufacturing of green technology is why, said an article published Monday by the BBC.
China generates more solar power than any other country, which is “a sign of where the country is heading,” and its wind power installations were more than triple those of any other country in 2020, according to the article.
“China is already leading the global energy transition,” the article quoted Yue Cao of the Overseas Development Institute as saying.
China also ranks seventh in the world for its percentage of electric car sales, the article said.
In addition to switching to green energy, China’s land is getting greener. “Here again, there is encouraging news. China is getting greener atafaster rate than any other country, largely asaresult of its forestry programs designed to reduce soil erosion and pollution,” the article noted.
China will cut emissions as much as possible and absorb what’s left, throughacombination of different approaches, and increasing the area of land covered in vegetation will help, as plants absorb carbon dioxide, according to the article. Enditem
Photo: An engineer conducts maintenance work atafloating solar farm in Panji District of Huainan City, east China’s Anhui Province, July 20, 2021. (Xinhua/Huang Bohan)